Sangano reCentre for Natural Resource Governance Roita Ongororo yeKukanganiswa kweDunhu reHwange neMakambani Ari Kuchera Zvicherwa
Kubvumbi 12, 2022
Makambani ari kuchera zvicherwa kuHwange anonzi ari kusiya mwena isina kuvharwa.
Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezvivanikwa munyika, reCentre for Natural Resource Governance, riri kuHwange uko riri kuita ongororo netsvakurudzo pamusoro pekucherwa kwezviwanikwa munharaunda iyi uye matambudziko ari kukonzerwa nekucherwa kwezviwanikwa uku, uye kuti zvii zviri kuitwa nemakambani aya kugadzirisa nharaunda dzavari kushandira.
Mukuru wesangano iri, VaFarai Maguwu, vanoti vari kushanda nevagari venharaunda iyi mukuita ongororo iyi. vanoti vari kuratidzwa dzimwe nzvimbo dzakasiiwa dziine mazimwena akangoshama nekudzika asina kuvharwa.
Vanoti zvimwe zvezvinhu zviri kunyunyutwa nevagari kumbumurwa kwehuruva inosimudzwa nemarhorhi ari kutakura marasha anenge acherwa pasi sezvo kusisina muchina inofambisa marasha aya, izvo zvinonzi zvinogona kukanganisa hutano hwevagari pamwe nevashandi.
VaMaguwu vanoti haisi kambani imwechete iri kuchera zviwanikwa munharaunda iyi, sezvo kuine makambani akawanda kwazvo anosanganisira emunyika neekunze kwenyika.
Vanoti pari zvino havasati vave kutaura nevemakambani ari kuchera aya, sezvo vachiri mushishi kugadzira gwaro ravo rezvavari kuwana, ravari kuti "Environmental Audit", vachiti kana vapedza kugadzira gwaro iri ndiro ravachazofamba naro vachipa makambani kuti averenge ozopawo mhinduro dzawo.
VaMaguwu vanoti vachasvitsawo gwaro iri kumapazi ehurumende akasiyanasiyana, anosanganisira rezvicherwa, revashandi nemabasa, rekuchengetedzwa kwezviwanikwa pamwe nekuEnvironmental Management Agency, EMA kuti vaone kuti vangabatsirana seyi kugadzirisa dambudziko iri.
Hurukuro naVaFarai Maguwu